အကောင်းဆုံး ချောမွေ့စွာ Pantyhose ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် ချောမွေ့စွာ Pantyhose စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
Jin Minng Industrial Co., Ltd. , ထုတ်လုပ်သူဖို့ကြိုးစားကြကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး exporter ဖြစ်ပါသည် ချောမွေ့စွာ Pantyhose နှင့်အာမခံချက်ကျွန်တော်၌အကြှနျုပျတို့၏ clients များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးပြုလိမ့်မည် Taiwan။ မည်သည့်ပြိုင်ဘက်ကျွန်တော်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါအရည်အသွေးသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးသင်သည်မည်သည့်ဘတ်ဂျက်အဘိုးပွိုင့်ကောက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကနေစုံစမ်းရေးကြိုဆိုပါတယ်စီနှင့်အခြားများအတွက်န့်အသတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပါ။
ပုံစံ - 8100
function ကို：နေရောင်ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချပါ.ခါးနှင့်ဝမ်းဗိုက်ပုံစံမျိုး.အသားအရေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်,texture နှင့်ခြေထောက်ပုံသဏ္.ာန်.
စရိုက်လက္ခဏာတွေ.：80 denier spandex အဓိကပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အလယ်အလတ်အထူနေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်,သင့်အသားအရေကိုကာကွယ်ပြီးမလိုလားအပ်သောအသားအရေကာကွယ်မှုဖြင့်ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်.နှစ် ဦး U ဒီဇိုင်းသည်တင်ပါးကိုအတွင်းနှင့်အထက်သို့တွန်းပို့သည်,ခြေထောက်များကိုရှည်စေပြီးအောက်ခြေကိုကျဉ်းမြောင်းစေသည့်ပုံဖော်ပေးသည်,နောက်ကျောကိုပိုမို curvy ပုံသဏ္givesာန်ပေးသည်.အသက်ရှူနှင့်အတူ pantyhose crotch,hygroscopicity ဝါဂွမ်းထည်,အသားအရေနူးညံ့ချောချောမွတ်သောအသားအရေကိုထောက်ပံ့ပေးသည်.တိုက်ခန်း-ယက်လက်ဝါးကပ်တိုင်-ရက်တွေ,၎င်းသည်တင်ပါး၏ပံ့ပိုးမှုအပိုင်းကိုထိရောက်စွာခိုင်မာစေသည်.ချုံ့တစ်ခုလုံးသည်ခါးနှင့်ဗိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်,muffin ထိပ်များနှင့်ဘေးထွက် bulges ရှောင်ရှားရန်ခါးကိုမြင့်.သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံသဏ္.ာန်များသည်ပါးလွှာသောပုံဖြစ်သည်,သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံသဏ္upာန်ကိုချက်ချင်းမှတ်သားပါ.ခြေချောင်းများသည်အားဖြည့်ပေးသည်,ကပြီးပြည့်စုံသောဝတ်ဆင်ရှိပါတယ်,ဆုတ်ဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်,ရှည်လျားသောအသက်ကိုပေးသည်.ပျော့ပျောင်းသောဆန့်နိုင်သည့်အထည်နှင့်စွယ်စုံဒီဇိုင်းကအမျိုးသမီးများ၏နေ့စဉ် ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုအတွက်ဤ pantyhose ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestsportssocks.com/my/seamless-pantyhose.html
အကောင်းဆုံး ချောမွေ့စွာ Pantyhose ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။